Umlando - Shanghai Bosun Abrasive Co., Ltd
manufactory yethu kanye agcine lisuswe kusuka Shanghai Baoshan eShanghai Songjiang, nokwenza umsebenzi wokuvuselela izakhiwo zonke umugqa umkhiqizo.
Nge imizamo eqhubekayo of bonke abalingani, imikhiqizo yethu Uthole udumo ikhasimende. Imikhiqizo abangu zithunyelwa eNyakatho Melika, eYurophu, eNyakatho ye-Afrika, eMpumalanga Ephakathi naseNingizimu-mpumalanga Asia.
Bosun Co., Ltd yasungulwa njengoba inkampani esincane futhi inkampani namanye amazwe professional, ngemva isicelo kanye nokuthekelisa namazwe angaphandle ilayisensi, saqala ukuthekelisa ithina.
Thina etshaliwe kanye labetibambile isitokwe non-metallic inkampani olwalwenza e Hebei futhi Henan, waqala ukuthengisa kanye ukuthekelisa Black Silicon Carbide, Brown Aluminium oxide, White Aluminium oxide ne Black Aluminium oxide.
Inkampani yethu waqala OEM izinga okusezingeni eliphezulu steel shot, steel namatshana futhi steel Imi wire shot inkampani ukuhweba Foreign bese zithunyelwa eNyakatho neMelika.
UMnyango wethu ucwaningo ubuchwepheshe nokuthuthukiswa iqhaza ekwakhiweni kweluhlaka lwetinhlelo izimiso zemboni ukukhiqizwa.
manufactory yethu waqala ukukhiqiza ezihlukahlukene neminye imikhiqizo, eyayibonakala yafuna emakethe. Ezinjalo njengoba Insimbi steel Imi wire shot, Aluminium cut wire shot, Zinc ukusika wire udubule yethusi ukusika wire badutshulwe.
manufactory yethu isidlulile ISO 9001 izinga international ohlelweni isitifiketi. Saba omunye metal yezinkampani ezinkulu China olwalwenza, okuyinto sekudayiswe ezifundazweni ezingaphezu kuka-20 futhi imizi China.
BOSUN Iqembu usekelé kulo nyaka. Saqala ukukhiqiza steel shot wire usike shot, steel udubule steel nezinhlayiya zenhlabathi Shanghai futhi Jiangsu.